Hichapụ Ụmụaka Niile Akụkọ nke Na-adịghị Ekezi Ihe Ndị Na-eme Eme
Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Hichapụ Ụmụaka Niile Akụkọ nke Na-adịghị Ekezi Ihe Ndị Na-eme Eme
LB na-egosi Full Story of a Footballer Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; 'Onye mbibi'. Anyị kpochapụrụ limụaka Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke ndị na-agba ọsọ England nke sitere na Nigeria gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Reece James Childhood Akụkọ gbakwunyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ
Obi abụọ adịghị ya, nwa amaala Bekee nke amụrụ na Nigeria bụ otu n'ime ndị na-eto eto na-eto eto n'ụwa n'oge a.
Anyị na-ewetara Dele Alli Akụkọ. Otu akụkọ banyere otú nzụlite siri ike si mee ka e nwee mmeri nke Premier League. Enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Hichapụ Akụkọ Nwatakịrị Alli - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Bamidele Jermaine Alli mụrụ na Milton Keynes, Buckinghamshire na Eprel 11, 1996, na nna nna Nigeria, Mr Kehinde Kenny Alli (Business Man) na nne Britain bu Denise Alli (House Wife). Hishụnanya ya maka football malitere ozugbo ọ nwere ike ịga ije (Age 1).
Hichapụ ndị nne na nna Alli enweghị mmasị dị ukwuu na talent nwa ha n'ihi nsogbu alụmdi na nwunye mgbe niile nke bịara. Enweghi ike n'alụmdi na nwunye ha mere ka ha gbaa alụkwaghịm n'otu oge Dele bụ nanị 3 afọ.
Ross Barkley Child Story Plus Ihe Na-adịghị Ebube Eziokwu
Nna ya Kenny kewara na nne ya Denise n'ime otu izu nke agbamakwụkwọ ha na 1996. Dịka iwu ịgba alụkwaghịm na UK, Denise nyere ikike zuru oke ịnọnyere nwa ya nwoke. E kwere ka Mr Kehinde Kenny Alli gaa leta nwa ya nwoke mgbe ụfọdụ.
Mgbe ha gbara alụkwaghịm, Dele nọrọ na nne ya na Milton Keynesm, United Kingdom mgbe nna ya kwagara Nigeria iji chee azụmahịa ya ọtụtụ nde naira nke o guzobere site na njem ya na United Kingdom.
Nkewa nke nne na nna ya dugara na nrọ nwa nke Dele. Ọ nwere ike na-egwu bọlbụ oge ụfọdụ, mama ya enweghị ohere ịdebanye aha ya n'ụlọ akwụkwọ ntorobịa ọ bụla.
Hichapụ Alli Biography - Nleta mbụ na Nigeria:
Nkwurịta okwu si nna ya mgbe niile mgbe ọ nọ na Nigeria ka na-eme ka mmekọrịta nna na nwa siri ike. Mgbe ọ dị afọ asatọ, Young Dele kpebiri na ya ga-eleta Nigeria na nke mbụ ya.
Dele Alli papa kụziiri ya omenala ndị Yoruba ma mee ka ọ ghọta mkpa ọ dị iyi uwe ọdịnala.
N'oge na-adịghị anya, nwa okorobịa bụ Dele ghọtara na ọ bụ onyeisi nke ezinụlọ a ma ama na agbụrụ ndị Yoruba nke Nigeria. O doro anya na nna ya bụ nwa eze.
Mgbe ọ nọ na Lagos, Dele zutere ma mete ndị ezinụlọ ya aka.
Mgbe ọ nọ na Lagos, ọ gara ụlọ akwụkwọ mba ofesi kwa afọ-20,000. Mgbe Nigeria nọ, Dele hụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ndị Naijiria niile nwere ezigbo enyi, na-ele ọbịa ma na-emeghe ya. O nwetụbeghị obi anụrị dịka a mụrụ ya.
Otú ọ dị, ọnụnọ ya na Nigeria dị mkpụmkpụ n'ihi mkpebi nna ya gbasaa azụmahịa ya na United States. Ha abụọ kwagara ebe ahụ.
Jack Wilshere Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Hichapụ Okwu Ya na Nna Ya - Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu:
Dele nwere obi ụtọ ịnọ na Nigeria ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ tupu ya agaa n'ụlọ ya na Houston, Texas ya na nna ya Kehinde.
N'oge ụfọdụ na ndụ ya, Dele enweghị obi iru ala papa ya kpebiri ịlụ onye ọ na-eche na ọ hụghị ya n'anya iji bụrụ nne nne ya. He gara agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ nke mere na Lagos.
Adam Lallana Ụmụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
Mgbe ihe omume ahụ gasịrị, esemokwu bilitere n'etiti ya na papa ya banyere Lola nwunye ọhụrụ ahụ. Nke a kpaliri echiche ọhụrụ banyere ịhapụ United States.
O kpebisiri ike ma rịọ papa ya ka o nyere ya aka ịlaghachi United Kingdom. Otu n'ime ezigbo ihe mere ị ga-eji lọta bụ ime ka nrọ ya na-eche ọfụma nke ọ chere nwere ike belata ihe mgbu ya.
Hichapụ Alli Biography Eziokwu - Returnlaghachi UK:
Mgbe Dele rutere United Kingdom, Dele zutere mama ya n'ọgba aghara. Ọ nọ na-arị elu n'ọgwụ ọjọọ na mmanya.
Nke a bụ mmalite ịkpọasị nke ndị nne na nna ọ na-eche na ha abụghị ndị nlereanya nye ya. N'oge na-adịghị anya, ọ malitere ibi ndụ rụrụ arụ n'onwe ya.
Dị ka Dele; "Enweghị nne na nna n'akụkụ gị, naanị nhọrọ bụ ịrapara n'okporo ámá maka nkwado".
Nke a bụ ihe banyere Dele Alli. Ya na ndị omempụ nọ n'okporo ámá ndị dị na London. Na 13, Dele nne ya nyere nkwado zuru oke nke ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji gboo mkpa ya.
John Terry Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Ihe Ọmụma
Ihe dị ịtụnanya ha mere bụ igbanye nrọ ya mgbe ọ kwere ha nkwa na ha agaghị agbaso mmetụta ọjọọ n'okporo ámá. Ọ bịanyere aka na nkwekọrịta mbụ ya na 16.
Hichapụ Ndụ Ezinụlọ Alli:
NME: Mr Kehinde Kenny Alli bụ Dele Alli's papa. Ọ bụ onye isi okpueze, onye nde mmadụ na onye ọchụnta ego ama ama na Lagos, Nigeria.
Tupu ịmalite ụkwụ ya na UK, Kehinde nwere ogologo oge nrọ nke mba na United Kingdom. Maka ya, imezu nke a pụtara ịlụ di na nwunye ma na-amụ nwa ka ọ bụrụ ebe a na-anọchi anya AKA (Na na, ihe Nigeria pụtara).
Ebumnuche ya zutere ma lee otu nwa nwoke aha ya bụ Bamidele Jermaine Alli mụrụ.
Nne: Ọ dịghị mkpa iwebata ka anyị na-aga ogologo ruo n'isi akụkọ ya. Dele Alli's mum ekwuola banyere oge na-agbawa obi o nyere nwa ya nwoke ka o wee mezuo nrọ ya ịghọ ndị ịgba egwu kacha elu.
Denise Alli na - alụ ọgụ megide mmanya na - egbu egbu ma chee ka ndị ọrụ Social wepụrụ ụmụ ya. Ya mere o nyefere Nyefee na di na nwunye ndị ndị ịgba ọsọ na-akpọzi nne na nna kuchiri ya.
Ugbu a, Denise nwere nne na-ekwu oge ọ bụla ọ na-ele Spurs ace Dele dị afọ iri na itoolu na-egwu maka klọb na mba ya, ọ maara na ya mere mkpebi ziri ezi.
Ndị na-efe ama anụbeghị eziokwu banyere otú Dele si ruo ebe ọ nọ taa. N'ịgbaso anya mmiri, Denise gwara LifeBogger:
Ekwesịrị m ịhapụ ya ka ọ gaa nye ya ọdịnihu ka mma. N’ụzọ mmetụta mmụọ, ọ na-agbawa obi mana ọ bụ ihe kwesiri ime. Enwere m nnukwu ihe ọ drinkụ drinkụ na-aba n'anya nke enweghị obi ụtọ n'oge nwata.
Ejiri m vodka, biya - ihe ọ bụla - maka afọ ole na ole. Ndị ọrụ na-elekọta mmadụ bịara leta m mgbe ndị agbata obi m mere mkpesa banyere otu m si eme na-azụ ụmụ m mana anaghịpụrụ ụmụaka m.
Ọ bụ mkpebi m ịhapụ Dele na ezinụlọ ọzọ. Amaara m na ọ bụ naanị ụzọ ọ ga-esi mezuo nrọ ya nke ịbụ ọkachamara n'ịgba ọsọ. O siri ike inyefe nwa m nwoke mana ọ ghọrọ nzọpụta ya. Enwere m nnọọ ekele maka otú ihe si gbanwee. ”
Mama ya kwuru, sị: "Mgbe ọ tụrụ ihe mgbaru ọsọ ahụ megide France, m si n'elu oche m pụọ -Enwere m ezigbo obi ụtọy. Nwa m nwoke mere ya n'onwe ya. Enwere m obi ụtọ maka ya ma nwee obi ụtọ na ihe ọ bụla ọ rụzuru. "
Denise zụlitere nwa ya nwoke bụ Lewis, ụmụ nwanyị Becky, na Barbara kachasị okenye bụ ndị ha na ya nọrọ.
Harry Winks nke nwata akụkọ akụkọ gbasara eziokwu
Dị ka ya si kwuo, "Oge siri ike - siri ike. Enwere m ụmụ anọ site na ndị nna dị iche iche anọ ma ọ dịghị nke mmekọrịta dị. M bụ otu mama. Anyị bi na Milton Keynes n'ime ụlọ nzukọ ụlọ atọ ma ọ bụ ihe siri ike.
Mụ na Dele dị nnọọ nso mgbe ọ bụ nwata. Ọ bụ obere mbelata. Ọ na-asịkarị, 'Kiss me mom'.
Enwere m ike ịhụ na o nwere talent na m ga-akpọrọ ya gaa n'ogige dị ka m nwere ike. Ọ na-achọ mgbe niile ịghọ ndị na-agba ọsọ n'ihi na ọ bụ nwatakịrị ma nwee nrọ nke ịgba egwu Barcelona. "
Ka ọ na-etolite, nsogbu nne ya malitere ịba ụba ma n'otu oge ahụ ọ malitere ịdaba na nsogbu n'ụlọ akwụkwọ n'ihi enweghị ezigbo nne ga-eduzi ya. a kọkwara ya na Social Services.
Ma site na mgbe Dele bụ 13, Denise malitere ichegbu onwe ya na ọ na-achọ ịbanye na ndị omempụ na-eti Bradwell ebe Milton Keynes nọ ebe ha bi.
O kwetara na ya nwere ike ịkwaga ebe dị kilomita isii iji nọrọ nso na enyi ya na Harry Hickford na ndị mụrụ ya, Alan na nwunye Sally. Ka Denise kwusiri ike na ọ dịghị mgbe a nabatara ya, ọ hapụrụ nwa ya nwoke oge niile na Hickfords na ụmụ ha abụọ na mpaghara ndị ọzọ bara ụba nke Cosgrove.
Denise kwukwara na onye ezi omume onwe ya: “Allmụaka niile ndị ọgbọ Dele nọ n'okporo ámá na-ese anwụrụ, na-arụ ụka ma na-apụnara mmadụ ihe.
Endedfọdụ nọrọ n’ụlọ mkpọrọ. Echere m na nwa m nwoke ga-eji ndụ ihu igwe ahụ nwaa ya. Ọ bụ ihe ịma aka mgbe ụfọdụ, dị ka ọtụtụ ụmụaka. Ọ ghaghị ịgbanwe ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma kwụsịtụ n'ụlọ akwụkwọ mbụ ya.
Ndị Hickford abụghị ndị enyi m mana ha nwere ụlọ mara mma ma amaara m na m ga-enye nwa m ohere a iji gaa n'ihu na ndụ ya ma nwee ọganiihu. Mgbe ọ pụrụ, enweghị anya mmiri, naanị mmetụta nke ahụ efe n'ihi na amaara m na ọ ga-apụ n'okporo ámá ma nwee nchebe.
Dele gwara m, 'Adị m mma Mama. Echegbula onwe gị banyere m. ' Ọ makụrụ m. O siri ike mana ọ na-enwe obi ụtọ na enwere m obi ụtọ.
N'agbanyeghị na m na-enyefe ya, ọ dịbeghị anya m si na Dele. Ọ ga-alaghachi na ebe m maka izu ụra ihe dị ka otu ugboro kwa ọnwa. Ọ dịkwa nso nna nna ya. Kenny ji ya anya isi. ”
Hichapụ Alli Untold Biography Eziokwu - Ahụhụ Ahụ:
Nke a malitere mgbe Dele sonyere Tottenham Hotspurs. Akwụkwọ akụkọ Sunday Mirror ahụghị Denise ma ọ bụ Kehinde ahụbeghị kpakpando ahụ na-ebili kemgbe ọ bịanyere aka na Tottenham site na Milton Keynes Dons. N'icheta ụbọchị ọ hapụrụ, Denise gwara Sunday Mirror:
Ọ nọ na nnukwu mmụọ wee sị, 'M hụrụ gị n'anya mum'. Amaghị m na ọ ga-abụ oge ikpeazụ m ga-ahụ ya. Ọ ka na-eju m anya. "
Denise kwukwara, sị: "Echere m n'èzí mgbe m gbusịrị egwuregwu, mgbe Dele bịakwara, m gwara ya okwu n'olu. 'Hichaa ... ọ bụ m ... gị mama. Ọ kwụsịghị. Ọ na-ele m anya, kwuru na ọ na-arụsi ọrụ ike ma chụpụ ya. Enwere m anya mmiri, ọ na-agbawa obi. Nke a mere ka m kwaa ákwá kwa izu. "
Akụkọ na-egosi na Ọ bụ mgbe oge a gasịrị Dele kwụsịrị yi Alli n'azụ uwe elu ya - ma kwurula na ọ kwagara ụlọ wee gbanwee nọmba ekwentị ya.
Di na nwunye a mebiri emebi kpughere na ha echerela n'èzí egwuregwu Tottenham na ụlọ ọzụzụ nke Dele na olileanya nke ịhụ nwa ha nwoke.
Kehinde, onye onwe ya bụ onye ahịa nke ọtụtụ nde mmadụ si Naijiria, kwuru na ọ kwụrụ ụgwọ ịga njem egwuregwu ma gaa na-ekiri ya na White Hart Lane iji gbalịa ịkpọtụrụ.
Ọ gwara Mirror Sunday: "Ịghara ịhụ ma ọ bụ ịgwa ya okwu na-afụ ụfụ. Mụ na ya nọrọ kemgbe ọtụtụ afọ, ana m anọkwa n'ebe ahụ maka mmetụta uche na ego.
Amaara m na ụfọdụ ndị ga-eche na anyị chọrọ ya maka ego ya, mana enweghị ike ịga n'ihu n'eziokwu ahụ.
Enwere m akụ na ụba nke aka m, achọghị m penny n'aka Dele. Achọrọ m ịnọ ebe a maka ya na ka ọ mara na m hụrụ ya n'anya. Anọ m ebe ahụ kemgbe ya bụ nwata ma enwere m foto iji gosipụta nke ahụ. ”
Ma Kehinde na Denise kwukwara, sị: “O nwere ike ịkpọ anyị asị n'ihi na alụkwaghịm anyị mere ka anyị nọrọ ya n'ebe dị anya n'oge ụfọdụ ọ kacha dịrị anyị mkpa. N’ime obi anyi, anyi g’enwe nwa anyi nwoke ekpere. Anyi na-ekpe ekpere ka o biaghachi na ndu anyi. ”
Hichapụ Nwanne Nwanyị - Na-arịọ ya Ka Ọ gbaghara:
Barbara bụ nwanne nwanyị nke okenye Dele Alli. Ọ na-ekwukarị banyere esemokwu ezinụlọ, na-ekwu na ọ bụ otu n'ime “Hardest ihe ha nwere na-aga thru”.
Dele Alli's nwanne Barbara Johnson rịọrọ Tottenham Hotspur kpakpando ka o cheta mkpebi ya na ya agaghị agwa ezinụlọ ya okwu, na-ekwu na ha anaghị enweta akụ na ụba ya ma ọ bụ mara ya.
Nwanne ya nwanyị nke okenye mechara rịọ ya. Ide na Instagram, Barbara Johnson kwuru, sị: “Kedu akụkọ na-agbawa obi, enwere olile anya na ị gụrụ bro a.
Anyị niile na-atụ uche gị ma hụ gị n'anya nke ukwuu, anyị abụghị mgbe ego gị ma ọ bụ aha gị ka anyị chọrọ ka obere #Delbot anyị laghachi, hụ gị n'anya nza dị ka jelii tots ”.
Hichapụ Alli Love Life:
N'otu oge, onye ọ bụla na-ajụ: isnye bụ Dele Alli na-akpa?… Ọ bụrụ na ịmabeghị, Dele Alli's girlfriend as of June 2017 bụ Ruby Mae.
Ruby Mae bụ ihe nlereanya zuru ezu mgbe ọ dị afọ 22 (Dị ka nke 2017) na ọ bụ ezie na ọ bụghị onye a ma ama dị ka Kendall Jenner. Anyị kwubiri na ọ na-aga nke ọma.
Ihe 5 ′ 9 ″ mara mma emeela ka ọ bụrụ maka mkpọsa dịka Dolce & Gabbana wee gaa n'ihu na-ese foto dị ka ọ na-abawanye.
Ruby Mae net net nwere ike ọ gaghị adị ugbu a, mana yana njikọ ya na Dele, ọ bụ naanị oge tupu ọ mata ya. Ugbu a, onyeisi Models Management, nọ na UK na-anọchi anya ya
Ọtụtụ kwenyere na ọ bụ ya mere Dele Alli agaghị enwe ike ịbịaghachi na ndị mụrụ ya oge na-adịghị anya. Dị ka ha ga-asị, "O nwere ebe siri ike na nwoke".
Ọ na-ege ya ntị ma na-ahọrọ ya karịa ezinụlọ ya.
Hichapụ Ọrụ limụaka nke Alli na Bilie:
Dele soro ndị enyi ya gbaa bọl site na nwata. Ọ bịara n'ọkwá na ndị òtù ya na agbata obi ya a na-akpọ City Colts. Nke a bụ ebe ọ mụtara football.
Dele malitere ihe a na-akpọ ọkwá dị elu na 11 n'oge ọ laghachiri Milton Keynes si United States.
Ọ malitere ịkụziri Milton Keynes Dons na 13. Ma mgbe ọ bịanyere aka maka ụlọ ịgba chaa chaa na 16 (oge ọ na-abanye n'ime ìgwè mbụ), ndị mụrụ ya na-ekwu na ha akpọghị ha - na ka oge na-aga, a sịrị na ọ dịwanye anya.
Afọ nkwụsị ya bịara na 2014 mgbe ọ chịkọtara ma chịkwaa midfield MK Dons '4-0 ụlọ meriri Manchester United na August 2014. Omume ya mere ka ọ nwee otuto site na pundit ọ bụla na egwuregwu ahụ wee duga ya na Steven Gerrard.
Alli mere ya Premier League gaa na Tottenham na February 2015 maka ego mbụ nke of 5 nde na afọ ise na ọkara. Agbanyeghị, ọ nọrọ na MK Dons maka oge fọdụrụnụ.
Ole na ole na-atụ anya Dele ka ha bụrụ ndị otu mgbe ọ malitere Spurs ọzụzụ tupu oge eruo. Mana ọ wụrụ ndị Fans n'ahụ mgbe ọ kpọnyere kpakpando Real Madrid bụ Luka Modric n'oge egwuregwu n'August wee merie ihe nhatanha megide Leicester City izu abụọ n'ime oge ahụ.
O nyeere ya aka ịbụ onye otu na-eme egwuregwu oge niile ma a na-etinye Spurs ka ọ okpukpu abụọ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na £ 20,000 kwa izu.
Dele Alli jụrụ Nigeria:
Na February 2015, a kọrọ na onye ọkpụkpọ Wimbledon John Fashanu gbalịrị ime ka Alli gwuo egwu maka Nigeria.
Enweghi obi uto, John. Mgbe ọ tụgharịrị ohere igwu egwu maka Nigeria, a kpọrọ Alli ka ọ kpọọ ndị otu ndị England wee mee ka ọ bụrụ onye mbụ megide Estonia na Ọktọba 2015 na-abịa dị ka onye na-anọchi anya oge maka Ross Barkley na mmeri 2-0.
Obi abụọ adịghị ya, a hụrụ Fash dịka onye kachasị mma iji kwenye Dele ịbanye na Super Eagles nke Nigeria. Ọ bụụrụ ya nna site na nwata.
Hichapụ Alli Biography Eziokwu - Manchester United Uplift:
Ọ na-achị Manchester United mgbe ọ ka nọ na MK Dons.
Dele Alli mere Premier League mbụ site na ịbịa dị ka sub maka Spurs megide Manchester United na egwuregwu mmeghe nke oge - mana nke ahụ abụghị oge mbụ nwata nwoke na-eto eto mere akara ya megide ndị dike England.
Na oge mbụ nke Louis Van Gaal na England, Alli so na ndị otu MK Dons nke mere ihere United 4-0 na Capital One Cup.
Alli na-eche na ọ bụ arụmọrụ ahụ mere ka ọ nwee nnukwu ego ịkwaga Spurs ọnwa ole na ole ka e mesịrị. Dabere na Dele;
“I nwere ike ikwu na o nyeere m aka ịmata. Anyị nwere ezigbo afọ dịka otu egwuregwu na nke ahụ bụ otu n'ime egwuregwu ndị kwụ ọtọ. Ọ bụ nnukwu ikpo okwu maka ụlọ ọrụ na mụ, na ụfọdụ ndị egwuregwu ndị ọzọ.
Ọ dị ntakịrị ihe megide United. Ọ bụ egwuregwu anyị na-atụghị anya na ọ ga-emeri, ma ya fọdụzie imeri ya. Anyị gosiri ụwa ihe anyị ga - eme n'abalị ahụ…
Hichapụ Alli Biography Eziokwu - Liverpool Fan:
Alli bụ n'ezie onye Liverpool na-akwado ya na-eto eto ma kwuo Steven Gerrard dị ka nwata nwata.
The Liverpool Echo kọrọ na Alli tụgharịrị gaa n'akụkụ uhie nke Merseyside iji chọta ìgwè ndị òtù football ya na ajụjụ ọnụ Kọmpụ, O kwuru banyere fandom ya maka akara ngosi Kop bụ Steven Gerrard na-etolite, na-ekpughe na ọ na-azụta akpụkpọ ụkwụ ya dabere na ihe onyeisi ndị Liverpool na-eyi n'oge ahụ.
Ọ dị mkpa ịkọwa na Liverpool na MK Dons kwetara na ha ga-akwụ ụgwọ maka Dele. Ọ bụ mkparịta ụka maka ụgwọ ọrụ ya nke dara. Liverpool kwuru na ha enweghị ike ịkwụ ụgwọ ya karịa 4000 pound kwa izu.
Hichapụ Alli Mwakpo:
Nleghara Nne na Nna nwere ahụmahụ na nwata nwere ikike pụrụ iche nke ọnya dị ka anyị hụworo n'ihe banyere Dele Alli. Ọdịda dị n'etiti ya na ndị mụrụ ya kwughachiri n'ezie kemgbe ọtụtụ afọ.
Ọ kpatara ma ihe ọjọọ ma nsonaazụ ọma. Akụkụ na-adịghị mma nwere njikọ gbasara iwe ya ugboro ugboro ọ na-egosipụta n'egwuregwu egwu. Nke a emeela ọtụtụ ọgba aghara n'etiti ndị iro ya.
Dị ka Dele, "M na-ewekarị oké iwe na njedebe, ya mere ọ bụrụ na m mere ihe ọjọọ ma ọ bụ nwee mkparịta ụka dị njọ, Mauricio Pochettino na-asị: 'Nke ahụ ga-abụ kaadị kaadị na ọkachamara ọkachamara' ma wepụ m na nnọkọ ahụ. Nke ahụ nwere ike mee ka obi ruo m ala. Ma m ka na-ewe obere iwe.
Dele Alli agbanweela ihe siri ike nwata echeta na talent ọ bụ taa. Nke a na-egosi akụkụ dị mma. Ọ na-enweta nchekasị ahụ iji bibie ìgwè ndị na-emegide onwe ya mgbe ọ bụla ọ na-echeta ebe ọ si bịa nakwa otú o siworo na-ewetara ndị mụrụ ya nsogbu na nleghara anya.
N'ịbụ onye si n'aka onye nchịkwa ya, Dele Alli nwere otu n'ime ndị otu ya na-ekele. Ọ bụghị onye ọzọ karịa Hugo Lloris bụ onye rụrụ ọrụ nna ya ebe ọ bụ na ọ na-abịa otu ndị Tottenham.
Dị ka Dele,
“Hugo Lloris enwewo mmetụta dị ukwuu n’ebe m nọ na Tottenham. Ọ gwala m okwu banyere iwe m na nke ahụ enyerela m aka nke ukwuu.
Ọ gwara m ka m ghara ikwe ka akụkụ ahụ ike ike ahụ pụta n'egwuregwu m, n'ihi ya, m ga-anọgide na-abụ onwe m.
Hichapụ eziokwu niile - LifeBogger akụkọ ndụ:
Anyị na-ewetara gị Hichapụ Alli's LifeBogger Rankings dị ka agbaso site na isi mmalite.